Ihe gbasara - CAPSI
The Center on African Philanthropy and Social Investment (CAPSI), nke mbụ n'ụdị ya n'Africa, ka ahaziri iji kwalite mgbanwe mmekọrịta mmadụ na ibe ya site n'iwulite omenala nke inye ihe dị irè, yana ọrụ mmekọrịta ọha na eze na nke obodo.
Ọ na-eje ozi dị ka isi iyi nke ihe ọmụma, netwọk mmekọrịta, na mkpali maka ọhụrụ na ntinye aka obodo. Ụlọ ọrụ ahụ na-achọ iwulite ọgbọ ọhụrụ nke ndị ọkachamara n'Africa, ndị nchọpụta na ndị ọkachamara na African Philanthropy, Social Investment na ọzụzụ ndị metụtara ya.
Akụkọ ihe mere eme na ntọala nke Center
Na mmalite 2000s, ntọala dị iche iche nke Africa philanthropy, nke gụnyere TrustAfrica, South Africa Trust, Kenya Community Development Foundation (KCDF) na African Women Development Fund (AWDF) chọpụtara mkpa ọ dị maka ịmepụta ihe ọmụma iji kwalite nkuzi ahụ nke ọma. , nnyocha na omume nke philanthropy na Africa. Nke a butere nguzobe Africa Philanthropy Network (APN) n'afọ 2009 na nkwalite ọ na-esote n'ịkwalite ọrụ ebere ndị Africa site na nzụkọ, mbipụta na mbọ ọganihu.
Na 2014, South Africa Trust (onye so na APN) na Mahadum Witwatersrand jikọrọ aka guzobe Onye isi oche mbụ na African Philanthropy, na-enweta nghọta na nkuzi sitere n'aka ndị nchọpụta, ndị na-eche echiche, ndị ọkà mmụta sayensị, ntọala, NGO na ndị na-arụ ọrụ nkeonwe n'ofe Africa. na gafere. Emere ọgbakọ ndụmọdụ ya na ndị ọlụ dị iche iche na-ebute usoro ọmụmụ na usoro nyocha nke sitere na echiche dị iche iche nke mba Afrịka na mba ụwa.
Onye isi oche na African Philanthropy bụ nzọụkwụ mbụ na njem ahụ iji guzobe Center on African Philanthropy and Social Investment. E hiwere ụlọ ọrụ ahụ n'etiti ihe ndị ọzọ iji kuzie, nyocha na ịzụ ọzụzụ gbasara ọrụ ebere na Africa n'ozuzu yana African Philanthropy karịsịa. CAPSI nwere ọtụtụ atụmatụ dị ka mkpakọrịta nyocha, nkuzi ndị isi, ọmụmụ ihe ọmụmụ PhD, ogbako kwa afọ na ụlọ akwụkwọ ọkọchị, n'etiti ndị ọzọ.
na-eme ka oghere dị na ọmụmụ ihe, nyocha na omume nke ọrụ ebere na itinye ego na ọha mmadụ na Africa.
Site n'ịhazi nyocha, mkparịta ụka na mbipụta na ịmepụta usoro etiti dị n'otu maka ịnweta ọdịnaya a, anyị na-atụ anya ileba anya n'okwu ndị a:
Enweghị akwụkwọ ndekọ aha nke ọrụ enyemaka ndị Africa.
Oghere ihe ọmụma nke na-emepụta site na enweghị nkesa akwụkwọ na-emepụta n'ime Africa.
Ọtụtụ akwụkwọ gbasara philanthropy Africa nke sitere na mpụga ma ọ bụ dabere na Western.
Enweghị akụkọ pan-African.
Gịnị mere ndị Africa Philanthropy?
Philanthropy bụ ihe dị mkpa iji kwalite atụmatụ mmepe na kọntinent ahụ. Afrịka philanthropy, site na nkọwa ya, bụ ntọala nke mmepe mgbanwe na-ewere ọnọdụ na kọntinent ahụ. Afrịka philanthropy - okwu nke bụbu mba ọzọ n'Africa, n'agbanyeghị na omume ya na-adị adị mgbe niile, na nke ndị ọkà mmụta na-agbasi mbọ ike ruo ọtụtụ afọ iji mee ka usoro ọmụmụ dị mkpa - bụ isi na njem mmepe Africa.
Mmepe kwesịrị ịbụ mgbanwe, na-adigide na nke dabere na ụlọ ọrụ Africa nke onwe ya, nke usoro ihe ọmụma nke ya na-akọwa yana akụrụngwa ya kwadoro. Achọrịrị nyocha na mmụta agụmakwụkwọ dị uchu na nke onwe ya ka ọ nwetakwuo usoro echiche nke mmepe Africa na-eduga, gbadoro ụkwụ na ụkpụrụ na ụkpụrụ echekwara na pan-Africanism na onyinye afọ ofufo nke Africa.
Enwere ọtụtụ ihe ịma aka na ịdekọ na ịgba ume n'ọtụtụ ọrụ nke enwere ike ịkọwa dị ka omume enyemaka ndị Africa. Ọtụtụ akwụkwọ gbasara ọrụ enyemaka na kọntinent Africa na-emetụta ọrụ enyemaka mpụga ma ọ bụ Western dabere na kọntinent ahụ, ma ọ bụ gbado anya naanị na South Africa, Kenya na Northern Africa.
Ọ bụ ezie na ugbu a, a na-amụba akwụkwọ ndị na-ahụ maka ọrụ ebere n'Africa, ma e jiri ya tụnyere afọ 10 gara aga, a ka nwere nnukwu ọdịiche dị na ihe ọmụma banyere ọrụ enyemaka. Ebumnuche etiti etiti a bụ itinye aka na oghere mmụta a site na nyocha ya na usoro mbipụta ya gbasara enyemaka enyemaka yana site na mkparịta ụka na omume kacha mma.
Ebumnuche nke Center
Site n'ịhazi nyocha, mkparịta ụka na mbipụta mgbe ị na-ekepụta usoro etiti agbakwunyere maka ịnweta ọdịnaya a, Center ahụ na-achọ imezu ebumnuche ndị a:
Ịkụzi philanthropy na itinye ego na ọha mmadụ na Africa, na ịmepụta otu ndị ọkachamara n'ọhịa.
Na-eme nyocha gbasara ọrụ ebere na itinye ego na ọha mmadụ na Africa, yana oke nkesa na ịkekọrịta ihe ọmụma.
Na-emetụta ọha mmadụ nke ọma site na nyocha ọhụụ na ịzụ ahịa ọha.
Na-eto eto netwọk bara ụba nke obodo, ndị na-eme iwu, mmalite, ntọala, ụlọ ọrụ na ndị NGO.
Itinye echiche Pan-African n'ọrụ gbasara inye ihe, inweta ihe ọmụma na mmepe echiche, ụdị na ngwa ọrụ dabara na ahụmịhe kọntinent, ọnọdụ dị ugbu a na mkpa.
Ịkwado na ịhazi nkuzi na ihe nyocha iji mee ka ndị ọkachamara n'Africa nweta ya, ndị isi ụlọ ọrụ, ndị ọrụ CSR, ụmụ akwụkwọ na ndị obodo.
Na-enyere ọgbọ na-esote ndị ọkà mmụta ebere aka site na ijikọta ha na ndị na-elekọta mmadụ, ndị na-enye onyinye na ndị ọkachamara na-ahụ maka ọdịmma.
Ndị na-ahụ maka ọzụzụ na philanthropy na itinye ego na ọha mmadụ na Africa maka njikwa dị mma nke ngalaba na akụrụngwa.
Ịkwalite na ịkwalite nghọta nke ọrụ ebere na itinye ego na ọha mmadụ na Africa, na otu esi eme ihe ndị a n'otu n'otu, obodo na ụlọ ọrụ nkeonwe.
Ịmata na ịgwa ndị isi egwuregwu okwu, na ịkwalite ikike ha maka ọmụmụ ihe, njikwa na njikwa.
Ịzụlite netwọk agụmakwụkwọ site na nkuzi, ọgbakọ na mgbasa ozi obodo.
Na-abawanye nyocha usoro mmụta na etinyere n'ọrụ.
Ịmepụta otu ndị ọkachamara na ndị ọkachamara na ndị ọkachamara na ndị ọkachamara.
Ịkwalite amụma na ihe akaebe dabere.
Inye usoro nkuzi na ọkwa postgraduate.